विकाश पराजुली बुटवल, २० जेठ
गत ४ जेठ आइतबार बिहान बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका २५ वर्षीय युवकको मृत्यु भयो । शनिबार रातीदेखि ज्वारो र झाडापखालाले सताए पनि तत्काल अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स चालकले पीपीई छैन भन्दै तर्किए । मृत्युपछि पनि उनलाई दाहसंस्कार गर्ने ठाउँसम्म लैजान शव वाहन एम्बुलेन्स आएन । स्काभेटरको मद्धतले उनलाई दाहसंस्कार स्थलसम्म पुराइयो र अन्त्येष्टि गरियो ।
१० जेठमा गुल्मी मदाने गाउँपालिका- ६ पुर्कोट दहका शिक्षकको कोरोनाबाट तिलोत्तमाको क्रिमसन अस्पतालमा मृत्यु भयो । त्यसलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा यसको सूचना पुग्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थ, प्रशासकीय अधिकृत जनक थापासहितको टोलीबीच शव व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने छलफल चल्यो । यसै क्रममा प्रशासकीय अधिकृत थापाले भन्सार छुट प्राप्त शव वाहनहरूको लिस्ट खोज्दै चालक र संस्थामा फोन गरे । कतिपयको फोन लागेन, कतिपयले जिल्लाबाहिर रहेको वहाना गर्दै संक्रमितको शव बोक्न इन्कार गरे । केही शव वाहनलाई फोन गर्दा बुटवलमा नभएको भन्दै टारे ।
लिस्ट हेरेर फोन हान्दासमेत शव वाहन प्राप्त गर्न थापालाई गाह्रो भइरहँदा अस्पतालमा मृतकका परिवार र आफन्तले उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै शव नउठाउने बताइरहेका थिए । संक्रमितको मृत्युपछि जति सक्दो शव व्यवस्थापनमा प्रशासनको ध्यान भए पनि शव वाहन खोज्न प्रशासनलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको थियो ।
लामो समयको प्रयासपछि थापाले हरिकला घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठानको शव वहानका चालकलाई फोन गरे । संक्रमितको मृत्युपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट फोन आउनासाथ हरिकला घिमिरे स्मृति प्रष्ठिानका चालक अर्जुन लामिछानेले वहानाबाजी बनाए । बुटवलमा छैन भन्दै तर्किए ।
उनले दाङको भालुवाङमा आफू रहेको र २ घन्टामा बुटवल आउने थापालाई बताए । लामिछानेसँग थापाले अरू संवाद गरेनन्, फोन राखे ।
तर, त्यसबेला लामिछाने बुटवलमै भए पनि शव लिनका लागि अस्पताल जान इन्कार गर्नुको एउटै कारण थियो, उनले शव वाहनको नाममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता गरेको सवारी एम्बुलेन्स भइसकेको थियो । शव बोक्ने गाडी एम्बुलेन्स भएर बिरामीको ओसारपसार गरेको थियो ।
शव वाहनलाई एम्बुलेन्स बनाएका लामिछानेले अहिले पनि लु२च ३४०० नम्बरको टाटा सुमो एम्बुलेन्स लेखेर हुइँकिइरहेका छन् । लामिछाने हरिकला घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठानका सचिवसमेत हुन् । कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी फैलिन थालेसँगै चैत पहिलो साता उनले शव वाहनलाई एम्बुलेन्समा परिणत गरेका हुन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा अहिले कति शव वाहन छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । गत असोजसम्मको अभिलेखअनुसार स्वास्थ्य कार्यालयमा जम्मा ६८ वटा एम्बुलेन्स र शव वाहन छन् । त्यसपछि कति एम्बुलेन्स स्वीकृत भए ? भन्सार छुट भएर कति आए ? स्वास्थ्य कार्यालयमा तथ्याङ्क भेटिँदैन । तर, लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ, वृद्ध जागरण सामाजिक संस्था, माडवारी समाज र हरिकला घिमिरे स्मृति प्रष्ठिानले शव वाहनका लागि स्वीकृति लिएका छन् ।
२ माघ २०७४ मा एकै पटक एम्बुलेन्स र शव वाहन सञ्चालनका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीको प्रस्तावमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनाली र तत्कालीन जनस्वास्थ्य प्रमुख केहरसिंह गोदारलगायतको समितिले हरिकला घिमिरे प्रतिष्ठानलाई स्वीकृति दिएको अभिलेख स्वास्थ्य कार्यालयमा छ ।
२ माघ २०७४ मा समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले भन्सार विभागलाई गरेको पत्राचारका आधारमा २ वटा सवारी साधन प्रतिष्ठानले खरिद गरेको थियो । भन्सार छुटमा २ वटा शव वाहन र एम्बुलेन्स ल्याएको प्रतिष्ठानले १ वर्षसम्म सिफारिस भएअनुसार नै सेवामा लागेपछि पछिल्लो समय दुवै सवारीलाई एम्बुलेन्स बनाएर चलाएको हो ।
नियमतः एउटै संस्थाले २ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउँदैन तर प्रतिष्ठानले नियमनकारी निकायको धज्जी उडाउँदै शव वाहनलाई समेत एम्बुलेन्स बनाउँदा आँखा चिम्म गरेको छ ।
‘जति बेला कार्यालयबाट फोन हानिरहेको थिएँ, त्यसबेला शव कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मात्र दबाब थियो’, प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले भने, ‘यस्तो बदमासी भएको छ भन्ने कल्पनासमेत गरिएन ।’ यसबारे थप बुझ्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
आफन्तजन मिलेर संस्था बनाउँदै, चलाउँदै
आफन्त र परिवारका सदस्यहरू मिलेर गठन भएका हरिकला घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठान र हेल्थ क्लब अफ लुम्बिनी २ संस्थामा पदाधिकारीहरू एउटै छन् । पद मात्र फरक छन् । पहिलो पटक १७ माघ २०७३ मा हेल्थ क्लब अफ लुम्बिनी दर्ता गरेका उनीहरूको समूहले २८ भदौ २०७४ मा हरिकला घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठान दर्ता गरे ।
हेल्थ क्लब अफ लुम्बिनीका अधिकांश पदाधिकारीे हरिकला घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठानका छन् । हेल्थ क्लब अफ लुम्बिनीको अध्यक्षमा अर्जुन लामिछाने, उपाध्यक्षमा मेघराज, सचिवमा अशोक ढुंगाना, कोषाध्यक्षमा कमल घिमिरे र सदस्यहरूमा पुष्पा कँडेल, सरिता पराजुली र हरिप्रसाद खनाल छन् ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मेघराज घिमिरे, केशवप्रसाद भटट्राई उपाध्यक्ष, अर्जुन लामिछाने सचिव, कमल घिमिरे कोषाध्यक्ष र सदस्यहरूमा अशोक ढुंगाना, पुष्पा कँडेल र विमला घिमिरे छन् । लुु२च ७७७ नम्बरको एम्बुलेन्स चलाउँदै आएको हेल्थ क्लब अफ लुम्बिनीले पुनः २०७६ कात्तिक महिनामा टाटा कम्पनीको हार्डटप विङ्गर गाडीलाई एम्बुलेन्सका रूपमा भन्सार छुटका लागि सिफारिस लिएको जनस्वास्थ्य कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
ऐनले १ सय बेडभन्दा माथिको अस्पतालबाहेक एउटै संस्थालाई २ वटा एम्बुलेन्सका लागि भन्सार छुट दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको भए पनि हेल्थ क्लब अफ लुम्बिनीले भने नियमविपरीत एम्बुलेन्स आयातका लागि भन्सार छुटको स्वीकृति पाएको छ ।
शव वाहन खरिद गरिँदै
कोरोनाबाट संक्रमितको मृत्युपछि शवको व्यवस्थापनमा शव वाहन चालकहरूले वहानाबाजी गर्न थालेपछि प्रदेश सरकारले कोरोना विशेष अस्पताललाई लक्षित गर्दै शव वाहन खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
संक्रमणको दर बढ्दै गएको र मृत्यु पनि बढ्न थालेपछि अब हुन सक्ने घटनालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश ५ सरकार संक्रमितहरूको शव व्यवस्थापनमा थप तयारीमा जुटेको छ ।
प्रदेशमा कोरोनाको उपचार गर्ने ४ वटा अस्पतालले मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या बढ्दै गए शव व्यवस्थापन जटिल हुन सक्ने आँकलन गर्दै प्रदेश सरकारले शव वाहन खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कोरोना विशेष अस्पताल र स्थानीय तहहरूले समेत बारम्बार शव वाहन सवारी माग गरेपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शव वाहन सवारी खरिद गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. उमाशंकर चौधरीले सम्बन्धित स्थानीय तहले शव वाहन खरिद गर्ने गरी बजेट निकासा भएको बताए । बुटवल उपमहानगरपालिका, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका र बाँकेको खजुरा गाउँपालिकालाई १५ देखि २० लाख रुपैयाँको बीचमा बजेट निकासा गराइसकेको र आवश्यक प्रक्रिया स्थानीय तहले सुरु गरिसकेको उनले बताए ।
‘सम्भावित घटनाबाट हुन सक्ने कठिनाइलाई हामीले पनि नजरअन्दाज गर्ने कुरा भएन । त्यहीअनुसार नै शव वाहन खरिदका लागि हामीले छिटो निर्णय गरेर बजेट निकासा गरेका हौँ’, उनले भने ।
उनले स्थानीय तहले शव वाहन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार नै खरिद गर्ने बताए । ‘अवस्था जस्तो जटिल भए पनि हामी कानुनसम्मत् जानुको विकल्प छैन । सवारी खरिदको प्रक्रिया सुरु भएको छ तर आउन केही समय अवश्य लाग्छ’, उनले भने ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्नुपूर्व नै आवश्यक सूचना निकालेको बताए । ‘हामीले सक्दो छिटो गर्न दबाब दिइरहेका थियौँ । बजेट निकासा नहुँदै सूचना जारी पनि गर्‍यो, अब बाँकी प्रक्रियाको काम हुनेछ’, उनले भने ।
प्रदेशमा बुटवल धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पताल, भैरहवाको भीम अस्पताल, दाङको बेलझुण्डीस्थित कोरोना अस्पताल र बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २०, २०७७, १२:१८:००
अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशा गरिएका बुटवलका २ ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’
गरे के हुँदैन ? तराईमै फल्छ स्याउ